Ducada karaamada barakaysan. ? ee Cibaadada, Si aad u Weydiso Mucjiso iyo Ammaan
Ducada ducada Waa sharci ah in iimaanka katoolikku had iyo jeer sameeyo. Dhammaan rumaystayaasha waa inay ogaadaan salaadda si ay u awoodaan inay u yeelaan markasta oo aan u baahanahay.
Xusuusnow in salaaduhu ay yihiin ilo aan adeegsan karno markasta oo aan dareemno baahida, ma aha inaan ku yeelno caqiido la'aan laakiin taa baddalkeeda dareenka dhabta ah ee qalbiga ku jira in waxa aan sameyneynaa ay tahay ficil ruuxi ahaaneedna waa in si dhab ah loo qaataa .
Ducadan waxaa loo sameeyaa, inta badan, in lagu caabudo Rabbigeenna Ciise Masiix, iyadoo la aqoonsanayo allabarigii uu u sameeyay aadanaha ee iskutallaabta dusheeda.
1 Salaadda Kan Quduuska ah Sidee loo tukadaa?
2 1) Salaadda cibaadada kuwa ugu wada quduusan
3 2) U ducaynta meelaha ugu qoduuska ah si aad u weydiisato mucjiso
4 3) Salaadiintu inay ku ammaanaan karaamada ugu wada quduusan ee meesha allabariga
5 4) Salaadda Ciida Quduuska ah kahor sariirta
5.1 Waa kuma kan ugu wada quduusan?
5.2 Iftiin ma u shidi karaa markaan u tukado kuwa ugu wada quduusan?
Salaadda Kan Quduuska ah Sidee loo tukadaa?
1) Salaadda cibaadada kuwa ugu wada quduusan
«Aabbaha Daa'imka ah, waan kuugu mahadnaqayaa adiga infinito Jacayl baa i badbaadiyey, xitaa aniga oo aan rabin. Waad ku mahadsantahay, Aabbahay, samirkaaga weyn ee i sugay. Ilaahayow waad ku mahadsan tahay naxariistaada aan la qiyaasi karin ee ii naxariisatay. Abaalmarinta kaliya ee aan kuusoo celin karo waxaad i siisay oo dhan waa daciifnimadeyda, xanuunkeyga iyo rafaadkeyga.
Waxaan ahay hortaada, Ruuxa jacaylka, inaad tahay dab aan la damayn karin oo aan doonayo inaan ku sii joogo jaceylkaaga, waxaan rabaa inaan hagaajiyo khaladaadkeyga, naftayda u cusbooneysiiso howsha qoduuskeyga oo aan ku siiyo sharafkeyga ammaanta iyo cibaadada.
Ciise barakeysanow, aniga ayaa hortaada jooga oo waxaan rabaa inaan ka qaado Qalbi aan la tirin karin Qalbigaaga Rabbaanika ah, waad ku mahadsan tahay aniga iyo nafta oo dhan, Kaniisadda Quduuska ah, wadaadadaada iyo diinta. Ciise, u oggolow in saacadahaasi yihiin run ahaantii saacado isu soo dhowaansho ah, waana saacado jacayl ah oo laygu deeqay si aan u helo dhammaan nimcooyinka uu Eebihiin ilaah iga dhigay.
Maryan oo bikro ah, Hooyo Illaahay iyo hooyaday, waan kugu soo biirey waxaanan kaa baryayaa inaad la wadaagto dareenka Qalbigaaga Hooyo.
Ilaahayow! Waan rumeysanahay, waan jeclahay, waan rajeynayaa waana ku jeclahay adiga. Waan ka raali galinayaa kuwa aan rumeynin, ee aan caabudin, ha sugin oo aan ku jeclayn.
Saddexmidnimada Quduuska ah ee ugu badan, Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, waxaan si qoto dheer kuugu sujuudaa oo aan ku siiyaa Jidhka ugu qaalisan, Dhiigga, Nafta iyo Ilaahnimada Rabbigeenna Ciise Masiix, oo jooga dhammaan taambuugyada dunida, si loogu magdhabo cadhada oo dhan, karaamada iyo danayn la’aanta isaga laftiisu ka xumaatay. Iyada oo loo marayo mudnaanta aan dhammaadka lahayn ee Qalbigiisa Quduuska ah iyo Qalbiga Nadiifka ah ee Maryan, waxaan kaa codsanayaa inaad beddesho dembiileyaasha saboolka ah. ”
Baryada cibaadada kuwa ugu wada quduusan Muujisaa is dhiibitaan buuxa oo ka yimaadda qalbiga, taasina waa sababta salaaddan qaaska ahi ay muhiimad weyn u leedahay maxaa yeelay dhexdeeda kuma weydiisan doonno wax gaar ah laakiin waxaan kaliya u dhiibi doonnaa qalbiyadeenna qofkii mudan ee leh qalbi fayow oo hoos u dhac ah sida lagu baray ereyga Ilaah.
Daacadnimo, wixii lagu sameeyo qalbiga iyo daacadnimadu waa hub aad u xoog badan oo xagga ruuxa ah.
2) U ducaynta meelaha ugu qoduuska ah si aad u weydiisato mucjiso
«Aabbaha jannada ugu Quduuska ah
Waad ku mahadsan tihiin, marka hore
Waayo, allabarigii jacaylka ahaa ee aad samaysateen, Adigoo dembiyadeenna u dhintay
Taasi waa sababta aan kuugu aqoonsan ahay, sida Eebahay, iyo Badbaadiye keliya
Maanta waxaan rabaa inaan hor dhigo Aabahayga aan jeclahay, noloshayda
Waad ogtahay waxa aan marayo, iyo waxa aan is-hoosaysiiyey hortiin
Aabbihiin ereygaagu wuxuu leeyahay nabaradaadii waannu ka bogsannay
Waxaan rabaa inaan ku dhaho ballantaas, inaad i bogsiisaan
Sayidow waxaan kaa baryayaa inaad adigu gacantaada ku taqasusto khabiirka dacwada ii haya
Taasi waa inaad siisaa xeeladaha lagama maarmaanka ah si ay iiga caawiyaan
Hadday tahay kan ugu quduuska ah Aabbahaaga
Gacantaada badbaadintaada kor iigu qaad, Oo jidhkayga ku nadiifi wasakh kasta
Ka fogee cudurada dhammaan unugyadayda
Waan ku baryayaaye, Aabbaha Quduuska ah
Dhegta u dhig oo maqal tukashadayda
Oo wejigaaga rabaani ah hortayda nimco ha ku siiyo
Waan ku kalsoonahay inaad maqashay baryootankayda
Iyo dabcan, waxaad ka shaqeyneysaa bogsashada aniga
Waa inaad ahaato doonistaada Aabbaha Jeceshahay
Ma u baahan tahay jiritaanka Ilaah noloshaada? Markaa waa inaad tukataa Salaadda Quduuska ah si aad u weydiisato mucjiso.
Tukashadani waxay kaa caawin doontaa inaad ku guuleysato mucjiso. Hadday sahlan tahay ama adag tahay, ducadu way fududahay.
U soo ducee qalbigaaga si weyn oo aamin ah weligiin rumee awoodaha Rabbigeenna.
3) Salaadiintu inay ku ammaanaan karaamada ugu wada quduusan ee meesha allabariga
«Waxaan maanta helaa iftiinka, nabad iyo naxariis
Kaasoo ah Eebaha samooyinka barakeeye,
Waxaan helaa Ciise jirka iyo nafta
Noloshayda inay ka buuxdo mahadnaq, hiigsi, farxad,
Xasilooni iyo xasillooni ka hor booqashadaada;
Aad baan u dhex joogaa
Waxaan nuujinayaa caqiidada xurmada leh ee ii ogolaata
Feejignow markasta oo qalalaasaha jiro;
Waxaan ku raaxaystaa farxadda shirkadda jannada
Ka hor safarka this of noloshayda in
Waxay ku duudduubtay ka ugu wada quduusan.
Waxaan qaatay karaamadan nafteyda
Oo waxaan ku helay naxariis, naxariis iyo jacayl.
Nabadu ha ahaato amiirka ruuxiisa ha nala jiro
Iyo in daaha gudcurka uu baxo marka
Rumaysadkaygu wax buu muujiyaa.
Rumayso tukashadan si aad u ammaano karaamada ugu wada quduusan ee meesha allabariga.
Ammaanu waa kor u qaadida laga sameeyo wadnaha iyo wacyiga ogaanshaha in aanu jirin qof la mid ah qofkaasi. Haddaba xaalkan waxaan ku ammaani doonnaa Rabbiga, oo ah Boqorka boqorrada naftiisa isu soo bixiyey jacayl. In isagu u adkaystay xanuunka iyo dullinimada si aan maanta ugu faraxno xorriyadda runta ah isaga.
Ammaanku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah salaadda maalinlaha ah oo aannaan iska indhatiri karin maxaa yeelay waa inaan had iyo jeer aqoonsanaa xoogga Rabbiga ee nolosheena.
4) Salaadda Ciida Quduuska ah kahor sariirta
"Oh Rabbi Ciise! in habeenkii aad cidlo ku tahay waababyo badan oo adduunka ah, iyada oo mid ka mid ah makhluuqaadkaagu uusan kuu soo booqan oo ku sujuudin.
Waxaan ku siinayaa qalbigayga saboolka ah, adiga oo rajaynaya in waxaaga oo dhan ay yihiin sida kuwo badan oo jacayl iyo maamuus leh. Adiga, Sayidow, marwalba waxaad ku soo jeedaa noocyada Karaamada, jacaylkaaga naxariis badanu weligiis ma hurdo ama daali maayo daawooyinka dembilayaasha.
Most Ciise gacaliye badanow, ciise yarowow, keligaa ii dhig sida nal ololaya. Sadaqada sadaqada ha ku shubin had iyo jeerna jacaylkaaga ku gub. La soco oh! sentinel rabaani ah!
Iska ilaali dunidan murugaysan, wadaaddada, nafaha quduus laga dhigay, kuwa lumay, iyo masaakiinta buka, kuwaas oo habeennada aan dhammaadka lahayn ay u baahan yihiin xooggaaga iyo raaxadaada, dhimashadan iyo addoonkaaga is-hoosaysiiya ee si wanaagsan kuu adeegaya nasasho laakiin adiga oo aan dhaqaaqin. kaaga timid, Taambuuggaaga ... halka aad ku nooshahay keli ahaan iyo aamusnaan habeenkii.
Ha ahaado Qalbiga Quduuska ah ee Ciise had iyo jeer ha barakeeyo, ammaano, sujuudo, la jeclaado oo lagu xushmeeyo Taambuugyada adduunka oo dhan. Aamiin. "
Ducadan loo ducaynayo karaamada barakaysan iyo karaamada barakaysan ka hor sariirta ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu awooda badan.
Kahor hurdada waa muhiim in la sameeyo xoogaa salaad ah ama u soo duceeya Karaamada Quduuska ah ee gaarka ah si ay nooga caawiso nasashada xasilloonida buuxda. U soo duceynta salaadda cibaada ugu qumman ka hor intaadan sariirta aadin waa wax aan sameyn karno maalin kasta iyo xitaa, baridda dhaqankan carruurta waa muhiimad weyn.
Kaniisadda Katooliga kani waa mid ka mid salaadda ugu muhiimsan maadaama ay xoojiso iimaanka masiixiga oo ay xoojiso ruuxa.
Waa duco ah aqoonsi, ammaanta y Cibaadada ciise iyo allabari uu aadanaha u bixiyo. Waxaan ognahay inay salaadiintu markasta faa iido ugujiraan nolosheena maadaama tan aan ku xoojineyno oo aan idin kugu buuxinayno nabad, taasina waa sababta ay nolasha noloshu ula wadaagto Rabbiga ay muhiim tahay.
Waa kuma kan ugu wada quduusan?
Karaamada ugu quduusan waa ficil iimaan leh oo lagu sameeyo kaniisadda katooliga halkaas oo aan ku aqoonsanno oo aqbalno allabari Rabbi Ciise Masiix. Ficilkan waxaa badanaa la sameeyaa Axadda saddexaad ee bil kasta halkaas oo la kashifo si ay rumaystayaashu kor ugu qaadaan cibaadadooda.
Martida qoduuska ah ayaa astaan ​​u ah jidhka Masiixa oo loo jabsaday dembiyadeenna aawadood jacaylka aadanaha waana lagama maarmaan in rumaystayaasha oo dhammi leeyihiin aqoontan si ay ugu dhiibaan cibaadada Rabbiga hortiisa.
Iftiin ma u shidi karaa markaan u tukado kuwa ugu wada quduusan?
Jawaabta waa haa, haddii shumacyada la shidi karo markay tukanayaan. Si kastaba ha noqotee, kani maahan qasab maaddaama salaadaha la qaban karo wakhti kasta iyo meelwalbana had iyo goor ma shidin karno shumac si aan u tukano. Mu'miniin badan ayaa had iyo goor u sameeya meelo allabari oo gaar ah meelahooda daaqadaha ah halkaasoo ay shumacyo u yihiin iftiin waqtiyada qaaska ah oo ah hadiyado cibaadada.
Kiiska ee salaadda iyo fal kasta oo ruuxi ah rumaysadka lagu sameeyay waa mid aad muhiim u ah maxaa yeelay waa meesha ay waxtarkoodu ku jiifo.
Ereyga Eebbe wuxuu ina barayaa inaanan kor u qaadi karin salaadda iyadoo maskaxda ka buuxan shaki ama fikirka ah inaan weydiisanno ay adag tahay maxaa yeelay markaas tukashadu waxay noqoneysaa waqti dhumis ah oo aannaan ka faa'iideysan doonin.
Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysatay ducada salaadda ciida. Lasoco ilaahay
Awood leh duco barakeysan